Ihowuliseyili Custom Heavy Duty Retractable Dog leash mveliso kunye nabathengisi | IKudi
Umsebenzi oSindayo oMninzi oRhoxiswayo wenja
Intambo yokubambisa ebuyiswayo yintsontelo ebanzi ethe tyaba. Olu luyilo lukuvumela ukuba uqengqe intambo umva kakuhle, enokuthintela ukubopha inja ukuba ijije kwaye idibanise. Kananjalo, olu luyilo lunokunyusa indawo ephethe amandla entambo, lwenze intambo yokutsala ithembeke ngakumbi, kwaye imelane namandla amakhulu okutsala, yenza ukuba kube lula ukusebenza kwakho kwaye ikwenze ukomeleze okuphuculweyo.
I-2.360 ° i-tangle-free yesiko elinemithwalo enzima yokurhoxisa inja inokuqinisekisa ukuba inja ibaleke ngokukhululekileyo ngelixa ithintela inkathazo ebangelwe yintambo. I-ergonomic grip kunye ne-anti-slip handle ibonelela ngokuziva ukhululekile ukubamba.
3.Nasi isikhombi senkunkuma esikhanyayo esimnyama esikhanyayo kunye nomqolo omnye weebhegi zenkunkuma ephatheni. Ingenazandla kwaye ilula. Ikuvumela ukuba ukonwabele ngokwenene ukonwaba kokuhamba.
Thumela uPhando Thetha ngoku
Mnyama okanye Mhlophe okanye siSiko
I-ABS + TPR + SS + Nylon
Iphakheji / uLogo:
Uncedo loMsebenzi oSebenzayo oMninzi oRhoxiswayo weNja
Inkqubo yokutshixa ethembekileyo iqinisekisa ukuba iribhoni inokwandiswa kwaye irhoxe kakuhle. Cinezela iqhosha lokuqhekeza ukuze uliqhekeze, kwaye uslayidele iqhosha elitshixwayo phambili ukuze utshixe leash. Ukuba ufuna ukubuyisela imeko yasimahla, tyibilikisa iqhosha emva. Ukuqengqeleka kunye nokuqengqeleka ngesithupha sakho kuphela, kulula kwaye kukhuselekile.
Umfanekiso woSetyenziso oluNzima loMthwalo oRhwebayo weNja
1.Are mveliso okanye urhwebo inkampani?
Singumzi-mveliso okhethekileyo kwimveliso yezilwanyana zasekhaya iminyaka engama-20.
2.Ukwenza njani ukuthunyelwa?
RE: Ngaselwandle okanye ngomoya ngeeodolo ezinkulu, ukuhambisa ukuhanjiswa njenge-DHL, i-UPS, iFEDEX, i-EMS, i-TNT yeeodolo ezincinci.
Ukuba unearhente yokuthumela eTshayina, singathumela imveliso kwiArhente yakho yase China.
3.What ixesha lakho phambili?
RE: Kujikeleze iintsuku ezingama-40 ngesiqhelo.if ukuba sinemveliso esitokisini, iya kuba malunga neentsuku ezili-10.
4.Ngaba ndingafumana isampulu yasimahla kwiimveliso zakho?
RE: ewe, kulungile ukufumana isampulu yasimahla kwaye nceda uhlawule iindleko zokuhambisa.
5: Iyintoni indlela yakho yokuhlawula?
RE: T / T, L / C, Paypal, ikhadi lamatyala njalo njalo.
6. Loluphi uhlobo lwephakheji yeemveliso zakho?
RE: Kulungile ukwenza ngokwezifiso iphakheji.
7.Can Ndwendwela umzi-mveliso wakho ngaphambi komyalelo?
RE: Ngokuqinisekileyo, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu Nceda ucwangcise idinga nathi kwangaphambili.
Ukukhangela umbuzo wakho wale Stainless Inja Inja
Egqithileyo I-Bungee eyongezelelweyo yokuRhola inja
Ileash ebuyisekayo kwiZinja ezincinci
Ihowuliseyili Retractable Dog leash
IKhola yeNja ebonakalisayo
I-Bungee eyongezelelweyo yokuRhola inja
Umsebenzi onzima oRholwayo wenja